Indianapolis စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်စီးပွားရေးစာအုပ်ကလပ် Martech Zone
တနင်္လာနေ့, သြဂုတ်လ 14, 2006 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
ဒီနေ့နေ့လယ်စာစားချိန်မှာငါနဲ့ဆွေးနွေးဖို့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အတော်များများနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တယ် အဝတ်အချည်းစည်းစကားပြောဆိုမှုများ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆက်သွယ်ရေး၊ ရုပ်မြင်သံကြား၊ ဆက်သွယ်ရေး၊ အင်တာနက်၊ အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး၊ အားကစား၊ ဖျော်ဖြေရေး၊ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာ၊
ပထမ ဦး ဆုံးပြဘို့မကောင်းဘူး!
ကျွန်တော်တို့အများစုဟာအပြည့်အဝဖတ်ပြီးခဲ့သည် အဝတ်အချည်းစည်းစကားပြောဆိုမှုများအချို့သည်၎င်းမှတစ်ဆင့်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပြီးအချို့သည်စာအုပ်မှအကြောင်းအရာအချို့ကိုအမှန်တကယ်အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကသူတို့ဆန္ဒရှိပါကလွတ်လပ်စွာလှုပ်ရှားနိုင်သည်။ သို့သော်နေ့လယ်စာစားပွဲ၊ စာအုပ်အပေါ်တုံ့ပြန်ချက်များနှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်ဘလော့ရေးခြင်းအပေါ်ကျွန်ုပ်ထင်မြင်ချက်မှာ -
Blogging သည်ကုမ္ပဏီအားလုံးအတွက်မဟုတ်ပါ။ သငျသညျပွင့်လင်းဖြစ်မသွားလျှင်, သင်ကောင်းသောထက်သင်၏ကုမ္ပဏီကိုပိုမိုထိခိုက်စေနိုင်သည်။
သင်၏ဖောက်သည်များသည်သင်နှင့်မပါဘဲစကားလက်ဆုံပြောဆိုကြလိမ့်မည်။ ပထမဆုံးအကြိမ်ဘလော့ဂ်ဖွင့်ခြင်းအားဖြင့်ထိုစကားပြောဆိုမှု၏လမ်းကြောင်းကိုထိန်းချုပ်ရန်ကြိုးစားပါလေ။ သင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများကိုမေးရန်မက်ဆေ့ခ်ျဖိုရမ်တစ်ခုစောင့်နေသည်။ ဘလော့ဂ်ဆိုတာအဲဒါကိုမမေးခင်မှတ်ချက်ပေးဖို့အခွင့်အလမ်းပဲ။
Blogging ပေါ်လစီများသည်အသုံးမ ၀ င်ပါ။ ၀ န်ထမ်းများဘလော့ဂ်ဖွင့်သောအခါ၊ မသင့်လျော်သောစာများကိုထည့်ခြင်းသည်၎င်းကိုအီးမေးလ်၊ ဖုန်း၊ စကားပြောဆိုမှုများတွင်ပြောဆိုခြင်းထက်မကချေ။ ၀ န်ထမ်းများသည်မည်သည့်နည်းလမ်းဖြင့်မဆိုသူတို့ပြောသမျှကိုတာ ၀ န်ခံရသည်။ သငျသညျဘလော့ဂါဖြစ်တယ်ဆိုရင် ... သံသယသောအခါ, မေးပါ! (ဥပမာ - ငါသူတို့အဖွဲ့နာမည်၊ ကုမ္ပဏီတွေ၊ မှတ်ချက်တွေစသဖြင့်စာရင်းလုပ်လို့ရလားအုပ်စုထံမှခွင့်ပြုချက်မတောင်းခဲ့ဘူး၊ ဒါကြောင့်ငါဒီကိုမသွားဘူး)
အရင်းအမြစ်များသည်စိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်စကားပြောဆိုမှုခေါင်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အချိန်ဘယ်မှာလဲ နည်းဗျူဟာကဘာလဲ။ သတင်းစကားကဘာလဲ
ဘလော့ဂ်ရေးရန်လွယ်ကူသည်၊ သို့သော်သင့်ဘလော့ဂ်၏နောက်ကွယ်ရှိနည်းပညာများကိုမည်သို့အသုံးချရမည်ကိုလေ့လာရမည်။ RSS, links, trackbacks, pings, comments၊
အကယ်၍ ဘလော့ဂ်လုပ်ခြင်းကိုမဟာဗျူဟာတစ်ခုအနေနှင့်အသုံးပြုပါက၊ ဒါကကျန်းမာတဲ့ဆွေးနွေးမှုဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါထင်တာကတော့အထွေထွေသဘောတူညီမှုဟာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ်ပြန်ပေးငွေကိုအကဲဖြတ်သင့်တဲ့ရွေးချယ်စရာမရှိတော့ဘူးဆိုတာပါပဲ။ သင်၏ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းများဖွင့်ရန်သင့်ဖောက်သည်များထံမှဝယ်လိုအားနှင့်မျှော်လင့်ချက်ဖြစ်သည်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်သူတို့ကတခြားနေရာကိုသွားပြီးရိုးရိုးလေးသွားမယ်။
အကယ်၍ သင်သည်အင်ဒီယာပိုပိုလစ်ဒေသ၌စီးပွားရေး၊ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးသို့မဟုတ်နည်းပညာကျွမ်းကျင်သူတစ် ဦး ဖြစ်ပါကကျွန်ုပ်တို့၏စာအုပ်ကလပ်တွင်ပါ ၀ င်လိုပါကမှတ်ပုံတင်ရုံသာပြုလုပ်ပါ ငါ Indy ကိုရွေးချယ်ပါ။ မင်း Indianapolis ကိုဘာကြောင့်ရွေးချယ်တာလဲဆိုတာကိုမင်းရဲ့ပုံပြင်ကိုတင်ပါ။ မင်းတို့ဖတ်ချင်တဲ့လာမယ့်စာအုပ်ရဲ့နောက်ဆက်တွဲအီးမေးလ်ထဲမှာမင်းတို့ကိုငါတို့ဖြန့်မယ်။
ဘေးထွက်မှတ်စုတစ်ခုတွင် Shel Israel သည် overse ည့်လမ်းညွှန်များကိုဖျက်သိမ်းခဲ့ပြီးအချို့သောအကြံပေးမှုများပြုလုပ်ရန်ပွင့်လင်းသည်။ သူပြောသလိုပဲ ငါအပေါင်ခံပိုက်ဆံအတွက်တိုင်ပင်ပါလိမ့်မယ်။ မစ္စတာအစ္စရေးကိုသူ၏စာအုပ်နှင့် Indianapolis ရှိလူအများစုအားဤအခွင့်အရေးကိုမိမိတို့နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအတွက်တွန်းအားပေးခြင်းအတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ ကျနော်တို့စာအုပ်တွေရဲ့ကုန်ကျစရိတ်ထက်အများကြီးပိုကြွေး!
ကျွန်ုပ်တို့၏ကလပ်ကိုလက်ခံကျင်းပခြင်းနှင့်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည့်နေ့လည်စာစားပေးခြင်းအတွက် Myra နှင့် Myra အတူတကွစီစဉ်ခြင်းအတွက်သူ၏ရက်ရောမှုအတွက် Pat Coyle အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။
PS: ငါ့သမီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ငါတို့အတန်းတက်ဖို့နောက်ကျခဲ့တယ်။ ပြီးတော့နေ့လည်ခင်းအတွက်အဆင်မပြေတဲ့ငါ့ကိုအလုပ်ရှင်ကကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
သြဂုတ်လ 14 ရက် 2006 ခုနှစ် 10:02 နာရီ
Doug၊ မင်းက ငါတို့ Shel Israel က မင်းကို အကြံဉာဏ်တောင်းတော့မယ်ဆိုတာ မင်း သတိထားဦး။
သြဂုတ်လ 14 ရက် 2006 ခုနှစ် 11:53 နာရီ
ကြင်နာသောစကားနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုခြင်းအတွက် Doug ကို ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ၎င်းသည် အလွန်ကောင်းမွန်သော စာအုပ်အသင်းတစ်ခုလိုဖြစ်ပြီး စာအုပ်၏အဓိကအချက်များစွာကို ဆွေးနွေးအသုံးပြုလျက်ရှိသည်ကို မြင်တွေ့ရန် အလွန်ခဲယဉ်းပါသည်။